Keio University - Tacliinta Sare Abroad ee Japan
aasaasay : 1858
Ha iloobin in aad wada hadlaan University Keio
Qor at University Keio
Keio waxa uu ku yaalaa Tokyo iyo Kanagawa, mid ka mid ah goobaha magaalooyinka waaweyn ee ugu weyn dunida ee. Nolosha Tokyo waa fursad ay ku kulmaan Japan iyada oo magaalada ay la Wajiyada badan imaanayn ay: caadooyinka gaar ah, quruxda dabiiciga ah, iyo technology higayaa. Iyada oo dhan qalankii casriga ah iyo raaxada magaalo casri ah, Tokyo ayaa dhawaan kaalinta magaalada adduunka ugu fiican in ay ku noolaadaan, iyo sidoo kale waa mid ka mid ah ay ugu ammaanka badan oo nadiifsan. Tokyo ayaa sidoo kale albaabka u haboon oo dhan Japan iyo inta kale ee Asia.
Kaalay Keio iyo bilaabaan aad safar u gaar ah iyada oo qalbiga magaalada, la indhaha iyo dhawaaqyada sinnaanshaha ee tacliinta Keio iyo hawlo ka baxsan manhajka.
Halka aad ku nooshahay waa sida ay muhiim u aad ka baran. Keio siineya ardayda raaxo, jawi nabadgelyo ku noolaanshahaa in la dhiiri geliyo is dhexgalka weli ogolaan gaarka ah, si aad ku raaxaysan karaan shirkadda ee facooda aad, laakiin sidoo kale waxay leeyihiin qaar ka mid ah meel wax ka barato imtixaanka in soo socda. Oo kharashka oo dhan ee aad uga yar tahay jaamacadaha u dhigma meelo kale oo Japan iyo dibadda. ardayda International xaq u leedahay ciidan oo dhan deeq waxbarasho, iyo Xafiiska Adeegyada Ardayda waxaa laga heli karaa si ay u caawiyaan ardayda arrimaha ay la kulmi karaan in ay nolol maalmeedka.
Ka baxsan fasalka (iyo qolka Qol aad), nolosha campus wixii a sugnaaday. Waxaa jira in ka badan 450 kooxaha iyo bulshooyinka si iskood ah ay maamulaan ardayda oo dhan dhaqan ee ciyaaraha iyo danaha. Ka qaybgal mid ka mid ah dhacdooyinka isboorti caan saaray by University Keio Association ee Athletic, taas oo hadda 40 kooxaha rasmi ah iyo kooxaha. Ha illoobin in uu ku biiro mid ka mid ah ciidaha campus arday maamusho Keio ee, kuwaas oo ah xooga ugu muhiimsan ee sannad waxbarashadeedka oo lagu qabtay sannad walba on kasta oo ka mid xarumood Keio ayaa sida qaar ka mid ah dhacdooyinka ugu weyn ee ardayga meel kasta oo Japan.
Hadda waxaan ku nool wakhti isbadel weyn. Isbeddelladan sida kululaaneysa ee caalamka, dadka gaboobay, tartan caalami ah sii xoogeysaneyso suuqa, iyo meel ah cyber sii ballaadhinayo waxaa aasaas ekaysiinaya dhismeedka dhan ah bulshada aan la nool. In muddo ah isbedel weyn oo kale, waxa uu noqonayaa mid ka badan oo ka adag noo ah in la tixgeliyo wax iyo xalinta dhibaatooyinka sida haddii ay si fudud yihiin kordhin ee la soo dhaafay.
Waa maxay halkan loo baahan yahay awood u leh inay fahmaan xaaladda cusub iyo qaado talaabo ku haboon oo ku saleysan fahamka this. In si kale loo dhigo awood u leh inay u malaynayaa in aad naftaada u noqon doonaa baahida weyn. More si gaar ah, awood u leh inay qabaa naftaada waa geeddi-socodka ee lagu aqoonsanayo arin, sharxaya arrinta, cadaynaya sharaxaad si loo ogaado haddii ay tahay heysta, iyo haddii sharaxaad aanu runtii qaban, waxaa ridaya talaabo si ay u sameeyaan xal. Tani waa hab ka mid ah waxbarashada ee aqoonsashada dhibaato xallin, dhismaha fikrad ah in macquul sharaxayaa dhibaatada, oo jirrabaya fikrad ah iyada oo loo marayo habab kala duwan oo cilmi ah si go'aan looga gaaro.
Sayidka, awood u leh inay qabaa naftaada waa, dhab ahaan, helay by barashada, tanina waa sababta aannu aasaasaha Yukichi Fukuzwa, kuwaas oo sidoo kale ku noolaa muddo ah isbadal weyn oo ka Edo u dhulgoosadka in muddo casriga Kacab, carrabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay waxbarashada. In times of guurka weyn, qabashada horusocod, cilmi keentay sii muhiim ah. Tusaale ahaan, waxaan u baahan nahay inay ku baaqaan in labada qoto-dheer oo cilmi maadooyinka in xallin karo dhibaatooyinka sida kululaaneysa ee caalamka iyo gabowga dadka, kuwaas oo halis joogtaynta ee bulshadeena, iyo cilmi-abuur leh in soo saari kartaa qiimaha cusub si ay u sameeyaan bulshada hodanka ah, inkastoo ay tartan suuqyada caalamka kulul iyo ballaarinta meel internetka.
Si kor loogu qaado noocaan ah cilmi, University Keio samaynayo dadaal kasta si ay u siiyaan jawi wanaagsan, taas oo xubnaheenna adag-shaqada awood iyo ardayda, kuwaas oo heegan u ah in ay cilmi-baarista ee cilmiga dabiiciga ah, cilmiga bulshada, iyo culuumta, ay awoodaan in ay si buuxda u ogaadaan awoodooda. Our aasaasaha Yukichi Fukuzwa aasaasay Jaamacadda Keio ku dhiirrigeliney in ay bulshada iyada oo loo marayo waxbarashada ee waqti isbedel weyn, iyo waxaan jeclaan lahaa in ay ogaadaan in uu mabda 'aasaasay adduunka casriga ah by dadka dhiirinta Ciddii fikiri kartaa naftooda u helaan xigmad cusub oo faa'iido u ah bulshada.
Madaxweynaha, Keio University
Kuliyada Business iyo Ganacsiga
Kuliyadda Sayniska iyo Technology
Kulliyadda Management Policy
Kuliyada Deegaanka iyo Information Studies
Kuliyada Nursing iyo Daryeelka Caafimaadka
Graduate School of Business iyo Ganacsiga
Graduate School of Science iyo Technology
Graduate School of Media iyo Maamul
Graduate School of Management Caafimaadka
Graduate School of System Design iyo Maaraynta
Keio University waxaa la aasaasay sannadkii 1858 sida School ah waxbarashada reer galbeedka oo ku yaalla mid ka mid ah guryaha guri nagaadi ah ee Tsukiji ah by aasaasihii Fukuzwa Yukichi. Its xididka waxaa loo tixgeliyaa sida dugsiga Han ee waxbarashada Kokugaku magacaabay Shinshu Kan aasaasay 1796. Keio magaceeda bedelay sida “Keio Gijuku” in 1868, taas oo ka magac xilligii yimid “Keio” iyo “Gijuku” sida turjumaad ah ee dugsiga Dadweynaha. Waxay u guureen meesha hadda ka jirta 1871, aasaasay dugsiga Medical in 1873, iyo waaxda jaamacadda rasmi ah ula Dhaqaalaha, Sharciga iyo Literacy waxbarasho ee 1890.
Ma rabtaa wada hadlaan University Keio ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
University Keio on Map
Photos: Keio University rasmiga ah Facebook
dib u eegista University Keio
Ku biir si ay ugala hadlaan of University Keio.